झलनाथले ओलीलाई यसरी थर्काएः पार्टी तपाईको निजी घर हो ? | Rajmarga
झलनाथले ओलीलाई यसरी थर्काएः पार्टी तपाईको निजी घर हो ?
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुरा सुनेर आक्रोशित बनेका झलनाथ खनालले पार्टीमा छलफल नै नगरी त्यत्रो समझदारी कसरी भयो र अहिलेसम्म किन जानकारी भएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
उनले इतिहासदेखि नै पार्टी पद्धतिका आधारमा चल्दै आए पनि अहिले कसैको घरजस्तो गरी चलाउन थालिएको आरोप लगाएका थिए ।
वर्तमान राष्ट्रपतिलाई दोहोर्‍यानुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्बीसुब्बा गुरुङ, सुवास नेम्बाङ, शंकर पोखरेल किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, मुकुन्द न्यौपानेले धारणा राखे ।
त्यस्तै, खनालको पक्षमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे बोलेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र भीमबहादुर रावलले पार्टी सञ्चालन पद्धति र शैलीका विषयमा ओलीको आलोचना गरे पनि राष्ट्रपति उम्मेदवारको विषयमा कुनै तर्क राखेनन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
Previous post: अब पैतृक सम्पत्तिको हकदार छोरी, के छ कानुनमा ?
Next post: राजा महेन्द्रमाथिको अपमानले जन्माएको अड्डा खारेज गरिँदै